U hadal - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-free
Raadi Kaalmada Cunnada
Ciyaarta SNAP ee Suuqyada Beeralayda
Cuntooyinka Dugsiga ee Bilaashka ah
u Bahanahay Qareen
Wax Ka Baro Gaajada
Helitaanka Hubinta Cuntada
Tababarka khadka tooska ah
SNAP iyo socdaalka
Qalabka Kulliyada SNAP
Sanduuqa Taageerada Cunnada xagaaga
Dhaqdhaqaaqa Ka-hortagga Gaajada
Guddiga La-talinta Macmiilka ee SNAP
Cunto loogu talagalay dhammaan reer Oregon
Cunto kasta waa muhiim
Dugsiyo aan gaajada lahayn
Kooxda Gaajada ee Oregon
Taariikhda & Himilada
Qorshaha Istaraatiijiga ah & Warbixinta Sannadlaha ah
Waxaad awood u leedahay dhaqdhaqaaqan. Nagu soo biir oo qaado tallaabo lagu xoraynayo.
KU SOO BIIR DADADAALKAYAGA U DOODA
U doodiddu waa habka ugu waxtarka badan ee lagu baabi'iyo gaajada iyo faqriga Oregon. Waxaan taageereynaa oo u doodeynaa siyaasadda guud ee kordhin doonta xasilloonida dhaqaalaha, kordhinta helitaanka shabakadda badbaadada kaalmada cuntada, iyo in la sii wado ka xoreynta dadka saboolnimada ee heer degaan, heer gobol iyo federaal.
Ma hayno ficilo furan oo hadda socda.
Waxaan u doodeynaa Oregon Capitol ee Salem si aan u taageerno qof kasta oo reer Oregon ah xaqa ay u leeyihiin in ay gaajada ka xoroobaan. Annaga oo aqoonsanay in gaajadu ay si aan qiyaas lahayn u saamayso dadka midabka, haweenka, carruurta, kiraystayaasha, ardayda kulliyadda iyo dadka ku nool meelaha miyiga ah, waxaanu ku dhiirigelinaynaa sharci-dejinta inay ka faa'iidaystaan ​​fursadaha lagu abuurayo waddo loo siman yahay oo gaajo-free Oregon.
Waa kuwan waxyaalaha aanu ka shaqaynayno ka hor kulanka 2019:
• Dugsiyo aan gaajada lahaynIlmo kastaa waxa uu mudan yahay bilow caafimaad qaba oo nolosha ah. Cuntooyinka dugsigu waxay ka caawiyaan carruurta inay bartaan, koraan, oo koraan. The Ololaha Gaajo-La'aanta Dugsiyada wuxuu raadiyaa inuu horumariyo talooyinka siyaasadda oo uu ku guuleysto isbeddelka sharci-dejinta 2019.
• Cusbooneysii oo Kor U Qaadista Canshuurta Dakhliga La Kasbaday (EITC): Marka lagu daro Child Tax Credit, EITC waxay 129,000 Oregon ka saartaa faqriga sannad kasta. Laakiin waxay samayn kartaa xitaa wax ka badan. Oregon waxa ay u dhigantaa 8% credit credit (iyo 11% loogu talagalay qoysaska leh carruurta ka yar 3), Oregon waxa ay haysataa fursad ay ku kordhiso lacagtaas oo ay qoysas badan oo shaqeeya ka saaraan faqriga kalfadhiga 2019.
Akhriso Dib-u-habaynta Sharci-dejinta Gobolka 2018
Daawo soo koobid
Waxaan u doodeynaa ilaalinta iyo xoojinta barnaamijyada federaalka ee ka hortagga gaajada sida SNAP, WIC, iyo Cuntada Dugsiga. Macluumaad ku saabsan heerka sharciyada federaalka ee hadda jira ee ku saabsan haqab-beelka cuntada ayaa la heli karaa xagga hoose.
Nagu soo biir si aad u dhammayso gaajada
Taariikhda & HimiladaDulmarka WacyigelintaQaanuunka Arrimaha Khaaska ahSiyaasadda ku dhawaaqaAqoonsiga canshuurta: 20-4970868
Tel: (503) 595-5501Fax: (503) 595-5504Saacadaha: MF, 9-5Nala soo xiriir
2900 SE Stark St, Suite 1-APortland, OR 97214 CINWAANKA BOOSTADAPO Box 14250Portland, OR 97293
© Partners for a Gaajo-free Oregon. Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta waa 501 (c) 3, 509 (a) 1 urur samafal. Naqshadaynta Shabakadda Mid ka mid ah Naqshad Plum
Raadi Dhammaan	Raadi Dukumentiyada Kaliya
English Español العربية 简体中文 繁體中文 한국어 Русский Afsoomaali Tiếng Việt